EX - ABSDF: မြန်မာပြည် အင်စတော်လေးရှင်း ၊ အာဏာခွဲဝေမှု့နှင့် ပြောင်းရွေ့ဝင်ရောက်မှု့ပြသနာ . . .
မြန်မာပြည် အင်စတော်လေးရှင်း ၊ အာဏာခွဲဝေမှု့နှင့် ပြောင်းရွေ့ဝင်ရောက်မှု့ပြသနာ . . .
Kyaw Kyawzawhlaing November 4, 2013 at 6:14am
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရသည် ထိုနိုင်ငံ ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ၊ စားဝတ်နေရေးပြသနာသာမက ၊ ယုတ်စွအဆုံး မိလ္လာပြသနာအထိ ဖြေရှင်းပေးရမည် ဟု ဆိုသည် ။ ထိုသို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပြသနာ အရပ်ရပ်သည် အစိုးရ၏ ခေါင်းပေါ်တွင်သာ စုပြုံ ကျရောက်နေသည် လော ။
အစိုးရဟူသည် မည်သူနည်း ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယား အရ အနိမ့်ဆုံး ဆယ်အိမ်မှုး ၊ ရာအိမ်မှုးမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ၊ ထိုမှတဆင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အောက်၌ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများ ၊ အထက်၌ ခရိုင် ၊ တိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများဖြင့် အုပ်ချုပ်ထားသည်ဟု အကြမ်းဖြင်း ဆိုရပေမည် ။
ထို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ယန္တယားကို အဓိက ဒေါက်ထောက်ပေးနေသည်က မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ တပ်မတော် တပ်ရင်း များကလည်း အခြေအနေအလိုက် ဒေါက်ထောက်ပေးနေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး
အာဏာသည် အစိုးရဟု ဆိုရလျှင် လွတ်တော်အရပ်ရပ်မှ လွတ်တော်အမတ်များသည် အစိုးရမဟုတ် ဟု လူဖျင်းနည်းဖြင့်ဆိုရပေ
တော့မည် ။ ဥပဒေ ပြုရေးအာဏာသည် အချိန်အရပ်ရပ်၌ ရှေ့တန်းမှာ မည်သည့်အခါမျှ ရောက်မလာခဲ့ ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ပြသနာများ မှာ မြေယာသိမ်းဆည်းမှု့ပြသနာများ ၊ ပြည်တွင်းစစ် မငြိမ်းသော ပြသနာများ နှင့် ပြောင်းရွေ့ဝင်ရောက်မှု့ပြသနာများပင် ဖြစ်သည် ။ ထိုပြသနာများသည် မည်သည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်လာသနည်း ။ မည်သို့ဖြေရှင်းကြရမည်နည်း ဟုသော ပြသနာ သည် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအီလစ်များအဖို့ အမေးရှိသော်လည်း အဖြေခက်သည့် ပြသနာဖြစ်လာရသည် ။ အကြောင်းရင်းမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်တည် တည်ရှိမှု့ကို ရှောင်ဖယ်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။
မည်သည့်အတွက် မြေယာသိမ်းသနည်း ။ နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ နှင့် ပုဂလိက ကုပဏီများအတွက် အကျိုးရှိမည် ထင်သည့်အတွက်သိမ်းရသည် ။ ထိုမြေယာသိမ်းဆည်းသည့် ဥပဒေသည် ယခုခေတ်မှ မိုးကျရွှေကိုယ် ပေါ်ထွက်လာသည်မဟုတ် ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာချီကတည်းက အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ အစိုးရ၏ ဥပဒေကို ယခုထိတိုင် ဘိုးဘွားအမွေ ထိန်းသိမ်းစို့လေ ရှိနေရခြင်းဖြစ်
သည် ။ အမှန်စင်စစ် ထိုဥပဒေကား အင်္ဂလိပ်ရေးဆွဲခဲ့သည် ဆိုစေကာမှု အလွန်ပင်တိကျသေချာသော အချက်အလက်များဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုဥပဒေ အဟောင်းအမြင်းအတိုင်း လိုက်နာ သိမ်းဆည်းပါကပင် ယခုကဲ့သို့ ရှက်ဖွယ်လိလိ ပြသနာများ
ထွက်ပေါ်လာအံ့ဟု မမြင် ။ သို့သော် မြေယာသိမ်းဆည်းခွင့်ရှိသော ယခင် ဘဏ္ထာတော်မင်းကြီး ၊ ယခု အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
ဦးစီးဌာနနှင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတို့၏ ဌာနဆိုင်ရာ ကြိုးနီစနစ်များခြင်း နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အပါတ်အသက် အချိတ်အဆက်
များခြင်း တို့ က မျက်နှာလိုက်ခြင်းနှင့် အလဟသ အကျိုးမရှိပဲ သိမ်းဆည်းထားသောမြေများ အဟောသိကံ ဖြစ်ရခြင်းတို့
ကြောင့်ပင် ယခုကဲ့သို့ ပြသနာများပေါ်ပေါက်လာရခြင်းပင် ။
အစိုးရ တံဆိပ်ကပ်၍ မင်းမြေကို အစိုးရသိမ်းတယ် ၊ လျှော်ကြေး ဒီလောက်ပေးမယ် ၊ ယူချင်ယူ မယူချင်နေ ၊ သိမ်းတယ် ဒါပဲဟု ဆိုကာ သိမ်းချင်တိုင်းသိမ်းရလျှင် ၊ အသိမ်းခံရသော လယ် ယာ မြေ များ၏ ပိုင်ရှင်များ၏ လတ်တလော ဒုက္ခ ၊ ပြောင်းရွေ့ရသော ရွာများ၏ နယ်စိမ်းပယ်စိမ်း ဒုက္ခ ၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့သွားခြင်း ဒုက္ခ ၊ မတန်မဆဈေးများဖြင့် အသိမ်းခံရ၍ နှစ်နာရခြင်းဒုက္ခများကို မည်သူက လာဖြေရှင်းပေးမည်နည်း ။ ပြည်သူ၏ ဒုက္ခ ကို ဖြေရှင်းရန် ၊ ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ရန် ၊ ပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်ရန် အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရလျှင် . . . ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်သော အစိုးရသည် . . . ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်ပါ၏ ။
ပြည်တွင်းစစ်တောက်လောင်သည်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကပင် သန္တေတည်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။ ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်းမွန် ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း မည်သည့် လူမျိုးတွင် သူပုန် ( ခေါ် ) တော်လှန်ရေးတပ်မရှိသည့် လူမျိုး မရှိ ။ လူမျိုးစုတိုင်းတော်လှန်နေကြသည် ၊ တော်လှန်ခဲ့ကြသည် ၊ တော်လှန်ကြဦးမည် ။ ယုတ်စွဆုံး ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်း ပင် မတရားမှု့ကိုလက်မခံ
တော်လှန်ခဲ့ကြသည် ။ ထိုသူများ မည်သည့်အတွက်တော်လှန်သည် ၊ ဘာ့ကြောင့်ဆက်တော်လှန်ရဦးမည်ကို ၊ ယခုလက်ရှိအစိုးရနှင့် နောက်တက်လာမည့် အစိုးရများ နားလည်ရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည် ။
ဖက်ဒရယ်သည် ပြည်နယ်ခွဲထွက်ခွင့်မဟုတ် ၊ ဖက်ဒရယ် ပုံစံတိုက်သည် နိုင်ငံရေးအိန်တာတိန်းမန့်အနေဖြင့်သော် ဌင်း ၊ ထိုမှ
တဆင့် နိုင်ငံရေး အင်စတီကျု့ရှင်း အနေဖြင့်သော်ဌင်း မပေါ်ထွန်းလာသ၍ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်မကြီးအစိုးရပြသနာသည်၂၀၁၅ အထိတိုင်အောင် ငြိမ်းနိုင်စရာမမြင် ။ နိုင်ငံရေး အီလစ်များအနေဖြင့်လည်း ပြည်မကြီးအစိုးရကို အာဏာခွဲဝေမှု့တွင်
တဖက်စောင်းနင်းမဖြစ်အောင် ၊ ပြည်နယ်များကို အာဏာခွဲဝေပေးနိုင်အောင် တွန်းအားပေးရမည်မှာ သံသယ ရှိစရာမမြင် ။
သို့ရာတွင် အာဏာသည် ပြည်နယ် လွတ်တော်တွင် တည်ရှိမည်လော ၊ ပြည်နယ် လက်နက်ကိုင်များ မှတဆင့် လက်နက်ကိုင်ပါတီများထံတွင်တည်ရှိမည်လော ဆိုသည်မှာကား ပါဝါကြီး သုံးခုအတွင်း ညှိနိုင်းရမည့် ပြသနာပင်ဖြစ်တော့သည် ။
တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှု့ ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် မျှော်ကိုးမှု့ အင်ဒီဂစ်တာ
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်နေသော ၀ ဒေသတွင် ဌင်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဌင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့ကြီးအရပ်ရပ်၌ တရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မှ စ၍ အောက်ခြေ လူမျိုးခြား နွားသူခိုးမှ အစပြု၍ မြန်မာပြည်သူ ပြောင်းရွှေ့ ၀င်ရောက်လာမု့ဒဏ်ကို အပြည့်အ၀ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခါးစည်းခံနေရရှာ၏။
ဒီမိုကရေစီဘိုးအေဟု ဆိုအပ်သော အမေရိကန်က မက်ဆီကန်များကို တိရိစ္ဆာန်များဖမ်းသကဲ့သို့ အလူးအလဲ လူဝင်မှု့ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းနေချိန် ၊ ဂရိတွင် ပြောင်းရွေ့ အာဖရိကသားများကို လူမဆန်စွာ လှောင်ပိတ်ထားချိန် ၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း ၊ မလှမ်းမကမ်းမလေးရှားတို့တွင် ၊ မဟာချိုင်ပြသနာ ၊ အော်ပရာစီပြသနာများဖြင့် ပြောင်းရွေ့သူများကို စပါယ်ရှယ် တွယ်နေချိန်တွင် မြန်မာ
နိုင်ငံ၌ အစိုးရ စီမံကိန်းမိုးပွင့်ကို လက်မခံသဖြင့် ခတ္တခဏနားလိုက်ရသည်ဟုပင် အသံထွက် လိုက်သေးသည် ။
ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သောကြောင့် ဘင်္ဂလီဟု ကောက်ခံခြင်းကို လက်မခံသောကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ အဓိက ဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်သော လ၀ကဌာနကြီးမှ ၀န်ထမ်းများပင် လက်လျှော့လိုက်ရသည်ဟု ကြားရသည် ။ မည်သူ့ကို ကြောက်နေသနည်း ။
ရခိုင်ပြည်တွင် ဘင်္ဂလီအနွယ် နှစ်သန်းနီးပါး ၊ ၀ နှင့် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး နိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် ပြည်ကြီးပေါက် တစ်သန်းနီးပါး ။
မည်သူ့မျက်နှာကို ကြည့်နေသနည်း ။ လူ့အခွင့်အရေး ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဟုကားမမြင် ၊ လူု့အခွင့်အရေးဟူသည်အမိန်အာဏာနှင့် အမှန်တကယ်လိုအပ်လာလျှင် ဖြစ်တည်မှု့၌ ပျောက်ကွယ်နေသည်မှာ ကား ကြာချေပြီ ။
လူ့အခွင့်အရေးသည် ကွက်ကြားမိုးလော ၊ လူု့အခွင့်အရေးသည် ဖိုရမ်လော ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းဝင်ငွေလော ၊ ထောက်ပံ့ကြေးလောအာဆီယံ ဥက္ကဌနေရာလော ၊ ဆန်ရှင်ဖွင့်နိုင်ရန် ဆေးကြိမ်လုံးလား ၊ တနိုင်ငံလုံးရှိ ပြသနာအရပ်ရပ်သည် ထိုဖြစ်တည်မှု့သုံးရပ်၌သာ တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ကြရန်လိုသည် ။
ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် နာစေးနေပြီး ၊ လျှော့ပေါ့ရမည့်နေရာတွင် ဖိထောင်းနေမည်ဆိုလျှင်ကားမြန်မာပြည် သည် ကမ္ဘာ့စာမျက်နှာတွင် ယခုထက်ပင် ထင်ရှားလာပေဦးမည် ။ နာမည်ကောင်းနှင့်ကား မဟုတ် ။
၄ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃
Posted by lu bo at 10:13 PM